Kubiza malini ukulungisa uhlaka lwebhayisikili lekhabhoni? - Ikhabhoni
Main > Ikhabhoni > Ukulungiswa kwe-Calfee carbon - izixazululo ezingaba khona
Ukulungiswa kwe-Calfee carbon - izixazululo ezingaba khona
Kubiza malini ukulungisa uhlaka lwebhayisikili lekhabhoni?
Ukuqhekeka okuncane (1/3 wobubanzi beshubhu noma okuncane) kungama- $ 200. Ukuqhekeka okuphakathi (ukuqhekeka okukhulu kuno-1/3 wobubanzi beshubhu) kungama- $ 300. $ 400 intandolungisaumonakalo omkhulu (ulahlekileikhabhoni, umonakalo omkhulu kunamasentimitha ayi-6 eduze kweshubhu. IVeloNews.comUhlaka ngabekungenzeka iwele ebangeni lama- $ 300.
Ukwephula noma ukuphula uhlaka lwakho lwebhayisikili lekhabhoni yinoma yibuphi ubunzima obubi kakhulu emabhayisikili. Empeleni, abanye baze balahlekelwe ukulala phezu kwayo, ukuze bafunde kabanzi ngokulungiswa kwamabhayisikili ekhabhoni, ngazithela kuCarbon Bike Repair eLeatherhead. Ngifuna ukuthola ukuthi yini engalungiswa, ukuthi ingalungiswa kanjani, kubiza malini, futhi iphephe kangakanani uma isilungisiwe? Imibuzo eminingi.
Ngakho-ke asingeneni sithole okwengeziwe. Yize ngithole nje ukuthi banayo ne-franchise eGoli. Awu kungani singayanga kulokho? (ehleka) (umculo omnandi) Ngilapha noRob Granvile, owasungula iCarbon Bike Repair.
Ngakho-ke Rob, ngifuna ukuthola ukuthi yini - uqale kanjani ukuyakha? Sasiyini isizinda sakho - Yebo, ngingumklami wezimboni ngeminyaka yama-90s ngizama nje ukuqonda okwengeziwe nge-carbon fiber futhi ngabe bekuyinto yeminyaka yobudala besikhala, bekunzima ukuyilungisa, ingabe ibingalungiseka? Futhi-ke ngilungise ibhayisikili lami futhi izindaba zaphuma futhi izitolo zebhayisikili zendawo zathi kwakukhona indoda esizeni eDorking ekwazi ukulungisa amabhayisikili akho kwase kuba uhlobo lokuzilibazisa. Ngakho-ke kwavela ukuthi indawo yami yokusebenzela yayiwukulungisa amabhayisikili eCarbon, eyayigcwele amabhayisikili, bengingazi ukuthi kunabantu abaningi ngaphandle lapho abanezinkinga - Kwesokudla. - ngamabhayisikili abo. - Ngakho-ke kuyisifiso manje esesibe yibhizinisi lokulungisa amabhayisikili. - Yebo. - Ngakho-ke ngifuna ukuthola ukuthi kwenzekani lapho othile eletha ibhayisikili lakhe lapha, ukuthi bathola kanjani ukuthi liphukile, noma yini, ngakho-ke, hamba kuyo yonke le nto bese uyilungisa uma ingalungiswa - Impela. - Futhi abanye, ngakho - Yebo - Ngabe sizoya kubona? - Masikwenze - bona ukuthi kusebenza kanjani. - Yebo Yebo. - Kulungile. (umculo odonsekayo) - Ngokwengxenye enkulu, ngoba ikhabhoni iqinile impela, singathola ukuthi kunokhuhla okukodwa kuphela futhi bangafuna ukuyibuyisa, ngakho-ke le yingxenye ewusizo kakhulu yenqubo.
Njengoba ngisho futhi, uma ibhayisikili lakho liphukile nakanjani, sizokuqinisekisa lapha njengoba nezinye izindawo zebhayisikili zingalimala, kuya ngohlobo lomthelela owenzekile kulelo bhayisikili. Ngaphambi kokuba ibhayisikili lakho lihlolwe futhi mhlawumbe lilungiswe, kudingeka ukuthi lihlanzeke ngokuphelele futhi lihlulwe uhlaka olufana naleli esinalo lapha. Kepha ungathumela kufreyimu yakho ihlanzwe ngaphambilini futhi isivele idiliziwe, noma ungathumela ibhayisikili lakho eliphelele futhi bazoliqaqa.
Ungayibuyisela futhi njengebhayisikili eliphelele. Isinyathelo sokuqala ukunquma umonakalo bese wenza ukuhlolwa, ngoba kwesinye isikhathi umonakalo ubonakala impela uma ifreyimu yakho yekhabhoni inemifantu emikhulu nemigodi. Kepha kwesinye isikhathi akucaci kangako.
Kungaba nokuqhekeka okuncane kuphela kupende futhi abafana kufanele babheke ukuthi ngabe lokhu kungumsebenzi wokupenda kuphela noma ngabe kukwi-carbon fiber uqobo. Ngalokhu unekiti elihle futhi une-x-ray ye-thermographic lapha. Kuphola kangakanani lokho? UPawulu uzosikhombisa sisebenza lapha kulo mongo. - Ngakho-ke esinakho lapha ukuphumula okusobala okuvela ngaphandle, kepha kwenza kube lula ukubona kukhamera.
Noma ngabe yonakele noma cha. Ngoba kwesinye isikhathi uma sezinzima kancane kuthatha isikhashana ukubona ukuthi kukhona yini umonakalo noma cha - ngiyakubona esibukweni, kuthiwani ngalokhu? - Ngakho-ke ungayibona esibukweni esikrinini lapha, kepha uma ubeka ukushisa okuncane kuyo izoletha ukushisa okugqame kakhudlwana kuyo yonke indwangu ukuze uyibone iphenduka imhlophe lapha. Ulayini omncane omhlophe.
Ngakho-ke umhlophe upholile, omnyama uyashisa. Ngakho-ke njengoba iphola ngokushesha kune-carbon ezungezile, imhlophe, ngakho-ke uyazi ukuthi unokwephuka - yebo. - Kuhle lokho? - Ngakho-ke lokho kungumonakalo ocacile esihlahleni esinamasondo, kukhona ingxenye ebonakalayo esohlalweni futhi.
Kepha kukhona ukuqhekeka okuncane kakhulu kwezinwele kupende. Ingabe lokho futhi kuyisiqephu somonakalo? - Ngakho-ke, yebo, ngakho-ke lesi ngesinye sezihloko ezinempikiswano enkulu esidinga ukuthi sizihambise ekucabangeni ngemicroscopic kune-thermographic imaging. Yebo, yilolo hlobo lomonakalo okunzima ukusho uma kuwukuphela nje kwepende, lapho-ke kulula ukuwulungisa, noma uma kuyinto ebucayi kakhulu futhi empeleni kukhombisa njengokuqhekeka kwekhabhoni Ngakho-ke abafana uzosikhombisa ukuthi singasinquma kanjani ngempela isimo salo monakalo. - Yebo, kunomehluko ohlukile phakathi kokwephula i-carbon fiber okuholela enqenqemeni olufana namazinyo olumazeke impela ngenkathi amakhefu owabona ukuthi acishe afane nomthombo nosiba maka, lapho ufaka ukuklwebha kuyo yonke into eklwebhekayo iqala ibe mncane bese iba mkhulu kuleyo ndawo.
Futhi-ke iyancipha ngendlela eqale ngayo. Imvamisa kuyindaba yokwephuka okungajwayelekile kakhulu ekubeni uqonde kakhulu. Ngakho-ke uma ubheke amakhefu, ufuna ngempela ukuthola onqenqemeni olumangelengele, umphetho omangele kakhulu ongasusa nopende ngenkathi lokhu kungukucindezeleka, hhayi inothi - konke kuyisicefe - kulungile.
Ngamanye amagama, imvamisa uma kuyikhefu ikhefu lizoqhamuka futhi lifane nocezu lwenkuni uma ulwephula bese uzama ukulinamathisela ndawonye futhi lizohlala ngokuziqhenya lapho kunekhefu khona. Lokhu ngokusobala ukucindezeleka. Ungawubona umugqa wethunzi lapho - Yebo - Kukhombisa ukuthi okuthile kuqhubekile futhi kwafohla, futhi lokho akusho ukuthi bekungeke kwaphuka lapho, kepha ngokujwayelekile ungakuhlaziya ngokwenza isivivinyo sokucindezeleka kuso.
Ukuthi kukhona yini ukunyakaza kule ndawo. - Sibonile nje ukuthi umkrolo ubukeka kanjani uma uhlaziywa, kepha lapha kufanele usibonise ukuthi ikhefu langempela libukeka kanjani futhi nokuhlolwa kwengcindezi nakho kwenziwa kukho. - Yebo - Ngakho. - Ngakho-ke, kufana nesibhamu sokuqala esisanda kusibona, kuhlale kunohlobo oluthile lomugqa omncane, ojijekile, njengoba kusho uRob, imvamisa ekhombisa ikhefu.
Kepha ukuqinisekisa nje, akuwona yini umbala? Sibe sesihlola ukuthi kusehlangothini lokushayela ukuze uhlale ungaphansi kwengcindezi. Futhi lapho uhlanganisa amandla, ayavuleka. - Lokho kuyethusa - kuhle, akukuhle, kuyesabisa ngebhayisikili lelo - Kulungile ukubona lokho - Yebo, kunjalo, manje-ke sesithole ukuthi leli bhayisikili lidinga ukulungiswa - Yebo. - Ngicabanga ukuthi sinakho ukuya esigabeni esilandelayo futhi ukhombise ukuthi kwenzekani ngokulandelayo. (umculo odonsayo) Kwa-Manje sithole umonakalo odinga ukulungiswa futhi umnikazi webhayisikili noma umshwalense uthathe isinqumo sokuthi bafuna ukulungisa.
Siya endaweni yokusebenzela, ngicabanga ukuthi indawo yeshashalazi - Ngakwesokudla, indawo yaseshashalazini - Yebo, ubona konke okwenzekayo. - Kulungile. - Siliphatha mahhala leli gumbi, igumbi likhanyiswe kahle, i-carbon fiber iyiphupho elibi le-elektroniki ngakho-ke kufanele sithuthe konke.
Ngakho-ke amakamelo ngokuvamile ahlanzekile. Ngiqonde ukuthi, sikhuluma ngomehluko phakathi - kuseduze netiyetha - indawo yaseshashalazini - njengoba ungathola, noma isihlalo sikadokotela wamazinyo nawo wonke amaDremels nokunye. Ngakho-ke ngena, ngena. - Kulungile Rob ngakho-ke yisiphi isinyathelo sokuqala esenzekayo? - Amasondo afakwa ilebula ukuze umlungisi azi ukuthi enzeni.
Ibhayisikili libe selibekwa kusithwali ngokuya kuqala. Futhi uyibeke otendeni lokulungisa okungalungile ngayo. - Manje yini inqubo yokulungisa eyenzeka lapha ngalesi chain chain, uRob? - Into yokuqala ukususa ikhabhoni elimele.
Ukuphendula kulokhu, ukubona ukuthi umonakalo ungakanani, kungadabula ikhefu. Lokhu kusho ukuthi izingxenye, izendlalelo, sezihlukanisiwe empeleni, kuleli cala ezibekwe zaba zinde ngaphezu kwekhefu. Into yesibili ukwazi ukuthi hlobo luni lwebhayisikili abasebenza kulo ukuze bakwazi ukuphindaphinda futhi benze kabusha ikhabhoni edingekayo kuleyo ndawo.
Ikakhulu, uma uphonsa ikhabhoni enkingeni bese uyisonga uzungeze i-carbon fiber, okungenziwa yinoma ngubani, ungadala ukungalingani ezindaweni ezithile zohlaka kubangele inkinga. - Lowo bekungumbuzo wami olandelayo. - Yebo. - Ngakho-ke asigcini nje ngokugoqa uhlobo oluthile lwebhande le-carbon fiber endaweni ethintekile ngethemba lokuthi lokhu kuzolungisa? - Yebo Cha.
Yebo, ngokuqinisekile ngeke. Angicabangi ukuthi kunengqondo ukulungisa ibhayisikili uma ungakwazi ukulibuyisela esimweni ebesikuso ngaphambi kwento enobungane impela, nathi siyashisela, ungakwenza lokho futhi. Futhi akunzima kangako uma ungakwenza lokho.
Kepha ekugcineni unebhayisikili elinosayizi ofanayo wodonga, amandla okuqina, ukuguquguquka kanye nekhabhoni modulus ebikade ikuhlaka lolu - kuthiwani ngezinhlaka nokunye okunjalo? Ingabe izinhlaka ziphindwaphindwa njengoba zazinjalo ngaphambili nezinto ezinjalo? - Hhayi-ke, izinhlaka, ngiqonde ukuthi, kunezinhlobo ezahlukahlukene zama-resin futhi abantu bazophikisana nami kuleli phuzu, kepha uma i-resin iselaphile yinto engokwemvelo. Umsebenzi wawo kuphela ukubopha imicu yekhabhoni ndawonye, ​​kepha uwagcine evaliwe, akunjalo? Ngokuphathelene nama-resins, akuyona into enkulu. Kodwa lokho futhi kuya ngokuthi iyiphi indawo yebhayisikili osebenza kuyo. - Umbuzo omkhulu enginawo, futhi nginesiqiniseko sokuthi abanye abantu abaningi banakho, lapho wenza ukulungisa okunjalo, umphumela unamandla noma ubuthakathaka kune yini eyayikhona ngaphambili? - Cha, kunjengoba kufanele kube njalo.
Idizayini yoqobo - ubukhulu, udonga lobukhulu, ngesizathu. Ungahle ufune ukuthi ibhayisikili liguquguquke endaweni ethile, okuzothatha ingcindezi kwezinye izingxenye zohlaka. Uma uyiqinisile le ndawo ngoba wesaba ukuthi ingahle iqhekeke futhi, empeleni uyenza kabi a) ikhwalithi yokuhamba, kodwa futhi engabeka ezinye izindawo zebhayisikili engcupheni.
Isibonelo, uma uqinisa le strut ukwedlula lolu hlangothi, leyo strut ngokuqinisekile izoba ngaphansi kwengcindezi enkulu kakhulu. Yebo zizofana ncamashí nasekuqaleni. - ngigcoba iminwe yami phezu kwayo futhi kuyamangaza ukuthi bushelelezi kanjani nokuthi ayinamthungo kanjani - umsebenzi omuhle, omuhle.
Kuhle. Ngakho-ke loluhlaka manje selenziwe lukhuni - futhi laphrintwa. - Futhi kufakiwe, ngakho-ke isinyathelo esilandelayo ukusipenda ngakho kubukeka sengathi senzile ngaphambi kokuba ngiqagele? - Kulungile.
Ihamba ngo-Q. C. Inqubo yokuyihlola ingcindezi ukuqinisekisa ukuthi ukulungiswa kuyaphumelela.
Akunasizathu sokudweba okuthile uma kungenjalo - uma kungalungile. - Kulungile. - Lokho
Ngisho, awukwazi ukukuzwa lokho ekhaya. Kepha thatha kimi, kuyamangaza lokho. (umculo omnandi) Ngakho-ke kulolu donga sinazo zonke izinhlaka onazo njengamanje esezilungisiwe zalungiswa futhi manje sezikulungele ukupendwa.
ingozi yebhayisikili las vegas
Futhi yenze ibukeke intsha futhi. Ngakho yini esinayo? ukwenza ukubalungiselela ukupenda? - Siya endaweni yokulungiselela, lapho ngemuva kokulungiswa - uma iphrofayli idlula i-QC idlula -Isifutho akufanele sibe nezinkinga zokufaka amajazi wokuqala. Kepha yini okufanele uyenze kuqala, ukumboza izindawo kufreyimu ukuze ubone lapha - Uma upenda kabusha amabhayisikili, ingabe kukhona into efana nenye into? Ukufiphaza noma kunebala lombala ungawubheka ngaphansi kwesibani esithile noma kanjani, lokho esitokweni ukuthi ekuqaleni sasikhona , noma? - Yebo, zonke izifutho zethu ziqeqeshwe kahle ngokufanisa imibala.
Ngokuyisisekelo amabhayisikili angama-99% eza nganoma imuphi umbala, kungakhathalekile umbala wawo - sinohlaka esilungiswe ukuze kuhlalwe ezihlalweni, futhi ukulungiswa okulindayo ikakhulukazi ngokuqedwa kwendawo okumele kube semsebenzini wokugcina. Ngakho-ke isizathu salokhu akusona nje isimo kodwa futhi neqiniso lokuthi kunesitika ohlangothini njengoba ubona lapho. Kulungile, enye yalezi zingosi isilungisiwe kanti enye ingeyokuqala, kepha ngiqonde ukuthi ngiyanxusa ukuthi utshele umehluko omuhle kakhulu.
Ngeke ngikwazi. Ukube impilo yami ibincike kuyo, bengingeke ngikutshele ukuthi iyiphi eyokuqala nokuthi yikuphi ukulungiswa. Ngakho-ke ingabe lolu luhlangothi noma lolo hlangothi? Angazi nhlobo.
Ngakho-ke abafana benza izitikha ezizongena esikhundleni sezindawo ezithile zebhayisikili ngokuya ngokuthi zidingeka kuphi nokuthi kulungiswa ini. Ngakho-ke uyabona ukuthi lokhu bekusebhayisikilini engisanda kukukhombisa lona. Kuhle kakhulu.
Ukulungisa ungqimba we-carbon fiber kuyinto eyodwa, kepha abantu bavame ukufuna ibhayisikili elibukeka ngendlela elalikade likhona ngenkathi lisha. Ngakho-ke sitshele ngohlobo lwenqubo yokufafaza - umqondo ukuthi ungabi nalo uthuli, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngezindawo zematte, ngoba awukwazi ukupholisha ukususa ukungapheleli ebusweni. Ukuze uthole la mabhayisikili ngohlelo udinga indawo engenalo uthuli.
Ngeshwa, awukwazi ukuyekethisa, kepha kufanele uthole amakamelo okufafaza afanele, kepha ngenhlanhla emhlabeni wokuhamba ngebhayisikili, ayikho into efana namakamelo okufafaza amabhayisikili ngasese, noma okungenani hhayi okwamanje. Ngakho-ke kufanele siguqule amakamelo ethu okufafaza. Futhi ngizokukhombisa umsebenzi ojwayelekile wokufafaza kule nqubo. - Kuhle, ake sibheke. (Umculo omnandi) Ngilapha noSantana egumbini lokufafaza.
Manje kubukeka njengomsebenzi wokufafaza oyinkimbinkimbi, osebenza kuwo Ngoba u - ngiqonde, angazi ngopende wokufafaza, kodwa emehlweni ami lolu hlobo lwe-gradient lugcwalisa lapha ngakho-ke lapho umbala usuka ophuzi uye kobomvu nezinto ezinjalo. Ukwenza kanjani lokho? - Yebo, lokhu kubuyiselwa kunzima kancane ngoba ifreyimu ngokuyisisekelo i-matte futhi iyacwebezela nayo. Ngakho-ke, bekufana nokukhala okukhulu kulayini okucwebezelayo, ngakho-ke nathi kufanele simatanise umata.
Isigaba semat. Ngakho-ke sizokuphela lolo hlobo olubomvu ngophuzi njengoba kubonakala ngakolunye uhlangothi lolo bese sizama ukuthola imibala efanayo nohlobo olufanayo lokufiphala. Ngakho - Ngakho-ke lolu luhlangothi olilungisayo. - Yebo.- Futhi lelo uhlangothi lwasekuqaleni ngakolunye uhlangothi. - Futhi yilokho okwangempela. - Kuhle lokho.
Sonke sinezinhlaka ezilungiswe ngempumelelo futhi ezintsha zadwetshwa. Futhi bakulungele ukubuyela kumakhasimende. Futhi uRob wangiphonsela inselelo kumdlalo ongafanele ngempela, ngempela, omuhle.
Yilokho ukukhanda egumbini elinala mafreyimu futhi uthe awukwazi ukuphuma uze uthole ukuthi ukulungiswa kwakukuphi, ngicabanga ukuthi ngizofela kuleli gumbi ngoba lokho akunakwenzeka ngokuphelele kuhlaka lapha futhi kufanele ngilandele ukuBuka ukulungiswa kodwa akakwazanga ukukuthola. URob ungitshele ukuthi ukulungiswa kulapha ngqo kuloluchungechunge, kepha ngiqonde ukuthembeka.
Angicabangi ukuthi ungakwazi. Umsebenzi ohlaba umxhwele. Amagama angihluleka ngempela.
Umbuzo enginesiqiniseko sokuthi abantu abaningi ababuka lokhu bazibuza wona ukuthi kubiza malini ukulungisa ibhayisikili lakho? Ngakho kubiza malini? - Well into yokuqala okudingeka uyenze ukuqinisekisa ukuthi iyasebenza kwezomnotho. Imvamisa sizokuxhasa lokhu ngokuthumela i-imeyili noma kunjalo. Uyazi uma kufanele ukuthumela.
Noma sikucebisa ngenye indlela. Ikhefu elijwayelekile le-chainstay lapha okwamanje lizungeze i-150 plus, uma lokho. Ngakho-ke kushibhile kakhulu kunokufaka esikhundleni sebhayisikili lakho, futhi lokho kungaba njalo, kuya ngokuthi iyiphi ingxenye yebhayisikili esililungisile, ngokuvamile sinesiqinisekiso sempilo yethu kulokhu kulungiswa. - Le inketho enhle kakhulu esikhundleni sokufaka lonke uhlaka.
Kepha zikhona yini izimo lapho ubusazolungisa ifreyimu, noma ngabe lezo zinhlobo zokulungisa azizange zikwenze kucishe kube ukonga? ? - Yebo, kuya ngezici ezimbili noma ngabe kuyibhayisikili lomzwelo noma lebhayisikili yakudala evela enkathini ethile. Sizokwenza konke okusemandleni ukwenza lokho - Yini engalungiswa nengakwazi ukulungiswa? ngohlaka lwe-carbon fiber? - Kunezindlela ezahlukahlukene zokukhiqiza futhi zibeka izinselelo ezihlukile kithina. Izingxenye ezibunjiwe ngomjovo kungenzeka ukuthi ziyizitini ezikhohlisayo ngoba awukwazi ukuziphinda ngongqimba lwekhabhoni ngendlela oyibona ngayo ekulungisweni kwamapayipi okuphukile, azikho izikhala zokulahla nokunye? - ukuphuma, yebo, noma iziphi izindawo ezinokuxhumana okuphezulu kwamandla - Kepha nani nikhona lapho - Siyaziphindaphindana - ukuphindaphindeka ngomjovo obunjiwe - ngaphandle kwalokho akufanele uye ezindlekweni zokulungiswa kongqimba kokuyekwayo ngoba Siguquguquka kakhulu - Kuyathakazelisa, akunjalo? Ngiyabonga Rob.
Ngiyabonga ngalokho. Inohlonze impela. Iqiniso liwukuthi, izingozi zingenzeka.
Futhi ngeshwa, ozimele bebhayisikili lekhabhoni banganqamuka, kepha kuhle ukubona ukuthi zingalungiswa, futhi kaningi ngezindleko eziphansi kakhulu kunalezo zebhayisikili elisha noma ifreyimu entsha. Futhi, uma unomshuwalense, umshwalense wakho angafaka nezindleko zokulungisa futhi, okuyinto enhle ngoba isiza ukugcina i-premium rig yakho iphansi. Kepha ngineqiniso lokuthi unethani lemibuzo mayelana nokulungiswa kwamabhayisikili ekhabhoni.
Nginethani. Ngizwa sengathi sisanda kuklwebha ingaphezulu. Ngicabanga ukuthi lesi kufanele kube yisihloko esihle kakhulu ukubuza i-GCN nganoma yini, ngakho-ke uma unanoma yimiphi imibuzo usazise esigabeni sokuphawula ngezansi, bese ubangeza esicini ku-Ask GCN Anything, futhi uma ufuna enye indatshana ukubuka, bheka Buka le ndatshana lapho uCywent afunda khona ukuthi i-graphine ingaba kanjani into emangazayo yozimele bamabhayisikili ngokuzayo.
Ungakwazi ukulungisa isondo lebhayisikili lekhabhoni?
Ingabe kungalungiswa imfoloko yekhabhoni?
Ikhabhoniisetshenziselwa ukwakha ozimele,amasondo, nezakhi. UKappius nethimba lakhe baphumelelekulungisiwengaphezulu kwe-4,500ibhayisikili lekhabhoniozimele, futhibonaqonda ukwaziswa ngaphakathi nangaphandle. Kulungile, naphezu kwanoma yiniwenakungenzeka ukuthi wezwa,ikhabhoniifayibhacankubekulungisiwe.
Ungakwazi ukulungisa uhlaka lwebhayisikili lekhabhoni?
Kungenzeka ukulungisa izingcezu zokwephukaizimfoloko, kuya ngokuthi umonakalo ukuphi. Sengikwenzile ukuphuma kwabafundi nokushayela okuqhekekile, kepha uma kungukuthi i-imfolokoama-blade, ngincoma ukuwafaka esikhundleni, ngoba ayifanele ingozi. Kuyafana neziqu nezibambo.
Ahlala isikhathi esingakanani amafreyimu ekhabhoni?
Ngaphandle kokuthi zonakaliswe noma zakhiwe kabi,ikhabhoniibhayisikiliozimelecanokokugcinangokungapheli. Abakhiqizi abaningi basancoma ukuthi ungene esikhundleni se-ifreyimungemuva kweminyaka engu-6-7, noma kunjalo,ozimele bekhabhoniziqine kangangokuba zivame ukudlula abagibeli bazo.
Ingabe i-carbon fiber eqhekekile ingalungiswa?
I-Carbon fiber iyakwenzaayinazo izinto zensimbi. Iningi lezitolo ezishayisanayo lizobe lilungisa isakhiwo sezimonyoisikhutha sekhabhoniamaphaneli. Ukuze uthole izinqubo zokufaka esikhundleni, i-aqiniswe noma iboshweisikhutha sekhabhoniingxenyecanukushintshwa esitolo.08/19/2016
Ungakwazi ukugoba amarimu ekhabhoni?
Ukuqina.Ikhabhoniyizinto ezinamandla ngokwedlulele futhiikhabhoniifayibhaamasondo angakwaziqina ngokuqinile.Bonaungakwenziukugoba, noma kunjalo, ngokungafani ne-aluminium, okusho ukuthibangakwazithambekela ekulimaleni okuvela emiphumeleni ebukhali noma ekuphahlazekeni laphobonasingaphansi kwemithwalobonaaziklanyelwe ukubhekana nazo.
Ngazi kanjani ukuthi imfoloko yami yekhabhoni ilimele?
Hlolaukuqhekeka noma ukufafaza kupende noma ijazi elicacile, elingakhombisaumonakaloku-ikhabhoniisakhiwo se-fiber.Hlolakonkeimfolokoizindawo zomqhele zokuqhekeka kanye / noma izikhala.Hlolanganoma imiphi imisindo engajwayelekile noma imisindo.Hlolaokwehliswayo okuxekethile, okugobile noma okuyekethiswe ngenye indlela.
Kufanele ngiyisuse nini imfoloko yami yekhabhoni?
Kumiselelakufanele uma ubona izimpawu zokukhathala. Akekho ongahlekisi ngokwazi ukwehliswa kwesithunzi seikhabhonii-fiber ngokuhamba kwesikhathi, futhi ukugqoka kuncike ngokuphelele endleleni ebigibele ngayo. Uma uzithola ungavikelekile ngempela ngakho, vele uthole okungafaniikhabhoniifayibhaimfoloko esikhundleni.18 2010.
Ingabe amabhayisikili e-carbon fiber aphuka kalula?
Lapho yenziwe kahle,isikhutha sekhabhoniingaba lukhuni kunensimbi futhi iphephe impela. Kepha uma yenziwe ngokungalungile,ikhabhoni-ifayibhaizingxenye zingakwaziaphule kalula. Ngokungafani nezinye izinto zokwakha, uma uqinisaikhabhoni-ifayibhaizingxenye, kungenzeka baphihlize umgwaqo.24. 2018.
Ngabe uCalfee ulungisa kanjani ukusebenza ngebhayisikili?
Onjiniyela beCalfee bafanisa ngokucophelela ukuma kwezintambo zoqobo zohlaka lapho besebenza kuhlaka, kubuyiselwa umlingiswa webhayisikili. Njengoba ukulungiswa okuningi kufaka esikhundleni sempahla kepha kungafaki i-carbon eyengeziwe, amafreyimu ngokuvamile awasindi ngokwedlulele.
Isiphi isitolo sokulungisa esingcono kakhulu samabhayisikili ekhabhoni?
ICalfee yindinganiso yegolide ekulungisweni kwekhabhoni, enama-palmares amade kakhulu - amafreyimu angaphezu kuka-5 500 adlule esitolo sokulungisa. Babelokhu bekuwo kusukela ngo-2003, futhi bakhe ama-carbon ozimele kusukela ngo-1987.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukulungisa uhlaka lwekhabhoni?
Siphakamisa ukuthi usebenzise i-FedEx noma i-UPS. Futhi hlola ukuthi “Ungalupakisha Kanjani Uzimele Wakho” ku-FAQ yethu yokulungisa iCarbon. Sizokushayela kungakapheli izinsuku eziyi-1-3 zebhizinisi ngemuva kokuthola ifreyimu yakho ukuze uyilungise. * Imali engu- $ 100 yokuhlola izokhokhiswa ngayo yonke ifreyimu engena esikhungweni sethu. Imali izokhishwa lapho kuvunywa umsebenzi wokulungisa.